Wararka - Qiimaha dawada ee duur -joogta ayaa hooseeya oo qatartiisu aad ayay u sarraysaa. Horumarinta alaabta dhirta iyo kuwa macmalka ah ayaa gacan ka geysan karta xallinta qalalaasaha ka jira warshadaha
Qiimaha dawada ee duur -joogtu wuu hooseeyaa halistiisuna aad bay u sarraysaa. Horumarinta alaabta dhirta iyo kuwa macmalka ah ayaa gacan ka geysan karta xallinta qalalaasaha ka jira warshadaha
“Guud ahaan, waxaa jira 12,807 nooc oo ah qalabka dawooyinka Shiinaha iyo 1,581 nooc oo dawooyinka xoolaha ah, oo qiyaastii ah 12%. Khayraadkaas, 161 nooc oo xayawaanka duurjoogta ah ayaa halis ku jira. Waxaa ka mid ah, geeska wiyisha, lafta shabeelka, misk iyo boodhka bile ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin agab daawooyin duur -joog ah oo naadir ah. ” Dadka qaar ka mid ah xayawaanka duurjoogta ah ee halista ku jira, sida pangolins, shabeellada iyo shabeelka, ayaa si weyn hoos ugu dhacay baahida loo qabo daawooyinka, ayuu yiri Dr. Sun Quanhui, oo ah saynisyahan ka tirsan Ururka Ilaalinta Xoolaha Adduunka, siminaarkii khabiirka 2020 ee “Daawada ee Bini -aadamnimada ”26 -kii November.
Sanadihii la soo dhaafay, oo ay wadeen ganacsiga caalamiga ah iyo danaha ganacsi, xayawaanka duurjoogta ah ee dhifka ah oo halista ku jira ayaa guud ahaan wajahaya cadaadis badbaado oo aad u weyn, iyo baahida isticmaalka badan ee daawada dhaqameedku waa mid ka mid ah sababaha muhiimka u ah baabi'intooda.
"Saamaynta dawooyinka ee xayawaanka duurjoogta ah ayaa dhab ahaantii aad loo badiyay," Sun ayaa sidaas yidhi. Waagii hore, xayawaanka duurjoogta ahi ma sahlaneyn helitaankooda, sidaa darteed agabyada dawadu aad bay u yaraayeen, laakiin taasi micnaheedu maahan in saameyntooda dawadu ay ahayd sixir. Qaar ka mid ah sheegashooyinka ganacsi ee beenta ah ayaa inta badan u adeegsada yaraanta daawada xayawaanka duurjoogta ah meel wax lagu iibiyo, marin habaabiya macaamiisha si ay u iibsadaan badeecado la xiriira, taas oo aan kaliya xoojin ugaarsiga iyo taranta maxaabiista xayawaanka duurjoogta ah, laakiin sidoo kale sii kicisa baahida loo qabo xoolaha duurjoogta ah ee dawada ah.
Sida warbixinta lagu sheegay, agabka dawooyinka Shiinaha waxaa ka mid ah geedo yaryar, dawooyin macdan ah iyo dawooyin xoolaad, kuwaas oo ay ka mid yihiin dawooyinka dhirtu boqolkiiba 80, taas oo macnaheedu yahay in saamaynta daawooyinka duurjoogta badidooda lagu beddeli karo dawooyin kala duwan oo Shiine ah. Waqtiyadii hore, daawooyinka xayawaanka duurjoogta ah diyaar uma ahayn, sidaa darteed si weyn looma adeegsan ama laguma darin cuntooyin badan oo caadi ah. Dad badan waxay ka aaminsan yihiin dawada duurjoogta waxay ka dhasheen fikrad khaldan oo ah “yaraanta waa wax qiimo leh” oo ah in dawadu aad u yar tahay, inta ay ka waxtar badan tahay oo ay ka qiimo badan tahay.
Iyada oo ay sabab u tahay maskaxdan macmiilku, dadku waxay weli diyaar u yihiin in ay wax badan ka bixiyaan alaabta duurjoogta duurjoogta ah sababta oo ah waxay rumaysan yihiin in ay ka fiican yihiin xayawaanka la beerto, mararka qaarkood marka duurjoogta la beerto ay durba suuqa u jirto ujeedooyin daawo. Sidaa darteed, horumarinta warshadaha beeraha duurjoogta ee dawada si dhab ah uma ilaalin doonto noocyada halista ku jira waxayna sii kordhin doontaa baahida duurjoogta. Kaliya marka la yareeyo baahida loo qabo isticmaalka duurjoogta ayaan bixin karnaa badbaadinta ugu waxtarka badan ee duurjoogta halista ah.
Shiinaha ayaa had iyo jeer muhiimad weyn siiya ilaalinta xayawaanka duurjoogta ah ee dawada ah. Liiska alaabta dawada duurjoogta ah ee hoos timaada ilaalinta muhiimka ah ee gobolka, 18 nooc oo xayawaan daawo ah oo hoos imanaya ilaalinta furaha dawladda ayaa si cad u liis gareysan, waxayna u kala qaybsameen qalabka dawada ee heerka koowaad iyo heerka labaad. Noocyada kala duwan ee daawooyinka xayawaanka duurjoogta ah, isticmaalka iyo tallaabooyinka ilaalinta ee fasallada I iyo qalabka dawooyinka ee Heerka II ayaa sidoo kale lagu qeexay.
Bilowgii 1993 -kii, Shiinaha ayaa mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka dawada geeska wiyisha iyo lafta shabeelka, waxayna ka saartay alaabtii daawooyinka ee la xiriirtay farmacopoeia. Bear bile ayaa laga saaray farmasopoeia 2006, iyo pangolin ayaa laga saaray daabacaaddii ugu dambaysay 2020. Ka dib COVID-19, Golaha Shacbiga (NPC) ayaa go'aansaday in dib loo eego Sharciga Ilaalinta Duurjoogta ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha (PRC) markii labaad. Ka sokow mamnuucidda cunista duurjoogta, waxay xoojin doontaa ka -hortagga cudurrada iyo kormeerka fulinta sharciga ee warshadaha dawooyinka duur -joogta.
Shirkadaha dawooyinkana, wax faa'ido ah kuma jirto soo saarista iyo iibinta daawooyinka iyo alaabooyinka caafimaad ee ay ku jiraan maaddooyinka duurjoogta halista ah. Ugu horrayn, waxaa jira muran weyn oo ku saabsan isticmaalka dawga duurjoogta ee dabar go’aya. Marka labaad, helitaan aan caadi ahayn ee alaabta ceeriin waxay keenaysaa tayada aan degganayn ee alaabta ceeriin; Midda saddexaad, way adag tahay in la helo wax -soo -saarka caadiga ah; Ta afaraad, isticmaalka antibiyootigyada iyo dawooyinka kale ee geeddi -socodka beerista ayaa adkeynaya in la hubiyo tayada alaabta ceeriin ee duur -joogta dabar -go'aya. Kuwani dhammaantood waxay halis weyn u yihiin rajada suuqa ee shirkadaha la xiriira.
Sida laga soo xigtay warbixinta “Saamaynta Ka -tagista Alaabooyinka Duur -joogta ee Khatarta ku ah Shirkadaha” oo ay daabacday Bulshada Adduunka ee Ilaalinta Xoolaha iyo Pricewaterhousecoopers, xalka suurtagalka ah ayaa ah in shirkaduhu ay si firfircoon u horumarin karaan oo u sahamin karaan alaabada dhirta iyo kuwa dardaaranka si ay u beddelaan badeecadaha duurjoogta ee halista ku jira. Tani ma aha oo kaliya mid aad u yarayneysa halista ganacsi ee meheradda, laakiin sidoo kale waxay ka dhigaysaa hawlgalka shirkaddu mid waarta. Waqtigan xaadirka ah, beddelka xayawaanka duurjoogta ah ee halista u ah adeegsiga dawooyinka, sida lafaha shabeelka macmalka ah, miski macmal ah iyo xamuuraha orsada macmalka ah, ayaa la suuq geeyay ama ay marayaan tijaabooyin caafimaad.
Bear -bear waa mid ka mid ah geedaha sida aadka ah loo isticmaalo xayawaanka duur -joogta ah. Si kastaba ha ahaatee, cilmi -baaristu waxay muujisay in noocyo kala duwan oo geedo Shiine ah ay beddeli karaan xiidmaha orsada. Waa isbeddel lama huraan ah oo ku aaddan horumarinta mustaqbalka ee warshadaha dawooyinka si ay uga tanaasulaan xayawaanka duurjoogta ah oo ay si firfircoon ugu sahamiyaan dawada dhirta iyo alaabada macmalka ah ee macmalka ah. Shirkadaha ay khuseyso waa inay u hoggaansamaan jihaynta siyaasadda qaranka ee ilaalinta xayawaanka duurjoogta ah ee halista u ah dawaynta, oo ay yareeyaan ku tiirsanaantooda xayawaanka duurjoogta ah ee halista u ah dawaynta, iyo inay si joogto ah u kobciyaan awooddooda horumar waara iyagoo ilaalinaya xayawaanka duurjoogta ah ee halista ku jira iyada oo loo marayo isbeddelka warshadaha iyo hal -abuurka farsamada.